အတိုက်အခံများနှင့် ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်း ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရက အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုများအား အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆို - Xinhua News Agency
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၊ ကရာကက်စ်မြို့၌ သမ္မတ Nicolas Maduro သမ္မတကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအပြီး ဗင်နီဇွဲလားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကရာကက်စ်၊ စက်တင်ဘာ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၌ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အတိုက်အခံအများနှင့် ဆွေးနွေးစဉ် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများအားလုံးအဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုသည့် ထုတ်ပြန်ချက်အား ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ Nicolas Maduro က စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင်တင်ပြခဲ့သည်။
“ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအား ပိတ်ဆို့ထားသော ကုန်သွယ်ရေး၊ငွေရေးကြေးရေး၊ စက်သုံးဆီ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအားလုံး နှင့် ဘဏ်စာရင်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဗင်နီဇွဲလားရွှေများအားလုံးကို ချက်ချင်းပြန်ပေးရန် ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပြုရန်’’ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အင်တာဗျူးစဉ် ၎င်းအဆိုပြုချက်များအား သမ္မတ Maduro ကထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းထုတ်ပြန်ချက်က ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ထောက်ခံမှုပြုထားသော ဥပဒေကြောင်းအရ ထောက်ခံချက်ဖြစ်ပြီး ကြီးမားသည့်အတိုင်းအတာရှိသောကြောင့်တောင်းဆိုထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသို့ ပြန်ပေးရန် အတွက် ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
သောကြာနေ့တွင်ပြန်လည်စတင်သောဆွေးနွေးမှုများသည် သြဂုတ်လတွင်ကျင်းပခဲ့သောပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်သဘောတူညီခဲ့သော“ ဆွေးနွေးဖွယ်ရာကိစ္စရပ်များ” အနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သဘောတူညီမှုရရှိရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ သာယာဝပြောရေး နှင့် ဗင်နီဇွဲလာပြည်သူများ ချမ်းသာသုခများ ရယူနိုင်ရန် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုများလိုအပ်ကြောင်း ’’ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်း သမ္မတက ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ Maduro က ၎င်းအနေဖြင့် အတိုက်အခံများနှင့်တံခါးဖွင့်ထားသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ နှင့်အတူ အမေရိကန်အစိုးရ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလည်းနားလည်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီစားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်တဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ အတူထိုင်ရတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလမ်းကြောင်းမှာပါတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက အမေရိကန် ရဲ့ အမြင်ပေါ်မှာ အားကိုးနေရလို့ပဲ’’ ဟု၎င်းကဆိုသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံသည်လည်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွင်ပါဝင်ကြောင်းနှင့် ရုရှားနှင့် နယ်သာလန်အစိုးရဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Venezuelan gov’t calls for end to U.S. sanctions during talks with opposition
CARACAS, Sept.5(Xinhua) — Venezuelan President Nicolas Maduro reported on Sunday that the government delegation participating in talks with the opposition in Mexico had brought forwardadocument calling for the end of all U.S. sanctions against the country.
Maduro said in an interview with Venezuelan state television that the document proposes “the immediate lifting of all commercial, financial, oil, and economic sanctions against Venezuela and the immediate return of all bank accounts, assets, and Venezuelan gold.”
The Venezuelan president stated that it is “a legally supported document and also, toalarge extent, backed byaset of letters signed by private business associations so that all is returned to Venezuela.”
He said that the talks, which resumed Friday, are following an “agenda of issues” agreed to in the first round of negotiations held in August.
The president stated that during the negotiations, they will have “the greatest amount of patience … to seek an agreement for peace, recovery, prosperity, and the well-being of Venezuelans.”
Maduro also explained that he understands the dialogue that has been opened with the opposition also involves the U.S. government.
“When we sit at that table, we understand that we sit with the U.S. government, because that platform … is the politicians dependent on the opinions of the United States,” he said.
Norway is also participating in the negotiations, and delegations from the governments of Russia and the Netherlands are also present. Enditem
လစ်ဗျားနိုင်ငံက ကွယ်လွန်ပြီးသော ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကဒါဖီ၏ သားဖြစ်သူကို ပြန်လွှတ်ပေး
အီရတ်နိုင်ငံက COVID-19 စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့် ပြည်ပဘုရားဖူးများ ဝင်ရောက်မှု ကန့်သတ်